Kutumira & Kudzoka - Popular Jewelry
Kutakura Mahara Dzimba Kutakura (United States)
Nakidzwa nekuremekedza kwakajairika kutumira dzimba (USPS YeKirasi Yekutanga) pamirairo ye $ 100 kana anopfuura.
General Kutumira Ruzivo
Ndapota bvumidza mazuva matatu ebhizinesi ekugadzirisa nekugadzirisa. Bvumidza imwe yakawedzera mazuva manomwe ebhizinesi ekuzvitakura.
Isu hatisi mhaka kune chero ngarava dzakarasika, dzakabiwa, kana dzakakuvara. Zvese zvinotakurwa zvinonishuwa uye mutengi anotora zvese basa rezvikumbiro zvakaitwa nemutakuri wekutakura.
Nezvikonzero zvekuchengetedza, isu tinongogona kutumira kune iyo kero yakapihwa pakubuda.
Nezvikonzero zvekuchengetedza, isu hatigone kukamura pasuru kana kushandura kuendeswa kwayo kana yangopihwa kumutakuri. Kana iwe uchida kushandura chero ruzivo rweodha (kutumira / kubhadharisa kero, ruzivo rwekubhadhara, nezvimwewo) unogona kukumbira kubviswa kweodha yako nekutibata nesu pakarepo pa info@popular.jew jewelry. Kana yako odha yakadzamiswa, unogona kutumira kodhi nyowani yakagadziridzwa.
Yedu mutemo inotora kwemazuva gumi nemashanu mushure mezuva rekutumirwa. Kana mazuva gumi nemashanu apfuura kubvira patakatumira pasuru yako, hatigone kudzosera mari kana kuchinjana.
Zvimedu zvetsika senge nameplates, mazita emhete, uye mazino etc. hazvidzorere uye hazvizowanikwe zvekushandisa sechitoro chikwereti. Kuzvishandura uye kushandura (kureva., Kunyorwa pachibangiri; chindori cheni inoregedzera) pane chimwe chinhu kuchadzora mutemo wekudzoka. Isu tichakuzivisa iwe nguva isati yasvika yekutenga kana chinhu chakakamurwa saizvozvo.
Zvinhu zvakadzoserwa zvinoiswa pasi pegumi neshanu% yekudzoreredza mari inozobviswa pamubhadharo. Mari yekutumira haina kudzoserwa.
Kuti uve unofanirwa kudzoka, chinhu chako chinofanira kunge chisina kushandiswa uye mumamiriro iwawo awakachigamuchira machiri. Iko kwepakutanga kuiswa kunofanira kuverengerwawo.
Refunds (kana zvichiita)
Kamwe kudzoka kwako kuchinge kwatambirwa uye kuongororwa, tinokutumira email kuti ikuzivise kuti tagamuchira chinhu (s). Isu tichakuzivisawo nezve kubvumidzwa kana kurambwa kwekudzoserwa kwako.
Kana kudzoka kwako kwakatenderwa, yako yekudzoserwa ichagadziriswa uye kiredhiti ichazongoerekana yaiswa kune yako kiredhiti kadhi (kana imwe nzira yekutanga yekubhadhara) mukati memazuva mashoma.
Kubhadhara kwemazuva kana kusipo (kana zvichiita)
Kana iwe usati wagamuchira mari yekudzosa mukati mevhiki yekudzoserwa chiziviso chiziviso, tapota taura nebhangi rako uye kiredhiti kambani kambani / PayPal. Kugadzirisa nguva yekudzosera mari inogona kunge yakareba zvinogona kutora imwe nguva mari yako isati yatumirwa.
Kana iwe wakatevedzera maitiro aya uye uchinge usati waudzwa nezve kana kugamuchira yako mari, tapota taura nesu pa popularjew jewelrycorp@gmail.com.
Shamba zvinhu (kana zvichiita)
Zvinhu chete zvinotengwa pamutengo wenguva dzose wechitoro zvinogona kudzoserwa. Zvinhu zvinotengeswa hazvigone kudzoserwa mari.
Exchanges (kana zvichiita)
Isu tinotsiva zvinhu chete kana zvisina kukwana kana kukuvara. Kana iwe uchida chinotsiviwa chaicho, titumire email pa info@popular.jew jewelry uye tumira chinhu chako ku 255B Canal Mugwagwa New York, New York US 10013. Shanduko hadziitwi pachikamu chegumi muzana yekubhadhara.
Kana icho chinhu chakaratidzirwa sechipo kana chakatengwa uye chakatumirwa zvakananga kwauri, uchagamuchira chikwereti chizere chekukosha kwekudzoka kwako. Kana chinhu chakadzoserwa chave kugamuchirwa, chitupa chechipo chinotumirwa kwauri-e-mail.
Kana chinhu chacho chisina kunyorwa sechipo panguva yekutenga, kana gifter ikaita kuti chikwereti chiendeswe kwaari, isu tinotumira mari kune iye iye anenge aine basa rekubata. yechikwereti / chitupa chechipo.
Kuti udzore chigadzirwa chako, ndapota taura nesu pa info@popular.jew jewelry neiyo nhamba yekuraira uye "RUDZA" mumusoro. Kunyangwe zvisiri madikanwa iwe ungasanganisira chikonzero chekudzoka (tinoedza kuvandudza basa redu uye mhinduro inogamuchirwa!)
Kana kudzoka kwabvumidzwa, ngarava kudzoka kukero inotevera:
255 Canal Mugwagwa Unit B
Iwe uchave nemutoro wekutakura mutengo unodzidziswa kudzoserwa. Kutakura mutengo panguva yekutenga hazvidzorere. Mari yekudzosa kutumira ichabviswa pamari yako.
Iyo nguva iyo inotora kuti iwane mari / yakachinjana chinhu chinosiyana zvichienderana neyako nzvimbo. Isu tinokupa iwe ruzivo rwekutarisa panguva yekutumira (kazhinji kuburikidza ne-e-mail) kana zvichikwanisika.
Kana iwe uri kutumira chinhu chinodarika madhora makumi manomwe nemashanu, funga kushandisa inoteedzerwa sevhisi yekutakura uye kutenga inishuwarenzi yepakeji yako. Hatigone kuvimbisa kuti isu tichagamuchira yako kudzoka.